ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကြောင့် သီရိလင်္ကာတွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် - Yangon Media Group
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကြောင့် သီရိလင်္ကာတွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ကိုလံဘို၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ကြောင့် အိမ်ခြေ ၉ဝ နီးပါးပျက်စီးပြီး ကားများမီးရှို့ခံခဲ့ရရာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေမြို့ ဂျင်တိုတာတွင် လုံခြုံရေးများတိုးမြှင့်ချထားကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် AFP သတင်းကဆိုသည်။ မြို့တော်ကိုလံဘို၏တောင်ဘက် ၆၈ မိုင်ခန့်အကွာမှ ဂျင်တိုတာမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုမှစတင်ကာ နိုင်ငံ၏လူများစု သီဟိုဠ် (Sinhalese) လူမျိုးများနှင့် လူနည်း စုမူဆလင်များ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီး အဓိကရုဏ်းအသွင်ကြီးထွားလာခဲ့ရသည်။ နောက်ရက်များတွင်လည်း ပဋိပက္ခဆက်လက်ဖြစ်ပွားသဖြင့် လူငါးဦးထက်မနည်း ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး အဆောက်အအုံ ၉ဝ နီးပါး ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေသခံရဲများကို ကူညီအားဖြည့်သည့်အနေဖြင့် စစ်သားများနှင့် ရေတပ်သားများ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ အခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ယခင်ရက်များကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ”ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက် အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံတင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တောင်းထားတယ်။ ထိခိုက်နစ်နာတဲ့သူအားလုံးကို အစိုးရက လျော်ကြေးပေးသွားမယ်”ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဝဇီရာအဘိဝါဒီနက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးပြီးပြန်လည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည်အထိ လုံခြုံရေးနှင့် ရဲများဆက်ရှိ နေမည်ဟု ၎င်းက ထပ်မံပြောသည်။
လူဦးရေ ၂၁ သန်းရှိသော သီရိလင်္ကာကျွန်းနိုင်ငံတွင် မူဆလင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ မူဆလင်များသည် တမီးလ်လူမျိုးများပြီးလျှင် ဒုတိယအင်အား အကောင်းဆုံး လူနည်းစုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဖြစ်သော သီဟိုဠ်လူမျိုးများမှာမူ လူဦးရေ၏ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိက ရုဏ်း တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သံသယရှိသူ ၁၉ ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ နောက်ထပ်သံသယရှိသူများကို လည်း စုံစမ်းရှာဖွေနေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။ သီရိလင်္ကာတွင် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မူဆလင်များ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားရာ လေးဦးသေဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
NCA လက်မှတ် မထိုးအဖွဲ့များကို စောင့်စားခြင်း မပြုတော့ဘဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာ၌ အလှူရှင်ရှိသော ရက်တွင် စားသောက်ရန် အဆင်ပြေသော်လည်း အလ??
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ၊ ရေကူးကန်များ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁??
ချစ်သုဝေ၏ ”ကတိ” တစ်ကိုယ်တော် Album မိတ်ဆက်
အလုပ်လက်မဲ့ ပညာတတ်များကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်ရှင်များ ပူးပေါင်း ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ?